မဟာဇနက္က ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
( လုံ့လနဲ့ ၀ီရိယမှာ လျှော့ကြရင် မှားခြင်းပါ.. လိုသာလိုမည် ပိုဘူးဘယ်ခါ ငုပ်မိတော့ သဲတိုင်.. စွဲကိုင် တက်နိုင်ရင် ထိပ်ဖျားရောက်နိုင်တာ )၂.. ( အလောင်းတော် မဟာဇနက္က ရွှေပင်လယ် ရေပြင်ကျယ် ကူးတော်မူရရှာ )၂ ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင် မဲမဲသဲသဲ ဇွဲလည်းမလျှော့ပါ လုံ့လကိုထုတ်ပါ ယောက်ျားပီပီ ရှိစေရာ စာဆက်ကာ ဗမာတက်စရာ မဟာဇနက္က မင်းကို စံယူပါ…
( သိလျက်နဲ့သာ မဏိမေခလာ မေးခွန်းထုတ်ပြန်တာ။ အလောင်းတော်ကိုဖြင့် တန်တော့လာ မာန်လျော့ပါ ပြန်ပြောတာ )၂.. ( ၀ီရိယထူးနဲ့ ဇွတ်ကူး၍နေရှာ… အသက်ကိုဆုံးတော့ ငါ့လုံ့လတည်မှာ )၂ … မေခလာကို ပြန်ကာဟောတာ မောလျက်နဲ့ဇောသက်ရေလယ်မှာ.. အမှန်ပါ လုံ့လ ကိုထုတ်ပါ ယောက်ျားပီပီ ရှိစေရာ စာဆက်ကာ ဗမာတက်စရာ မဟာဇနက္ကမင်းကို စံယူပါ….
( ကျောက်ဖျာထက်ပေါ် စက်ရာ… အလောင်းတော်ကြီးရဲ့ဘုန်သမ္ဘာ၊ ၀ီရိယကြောင့် မှန်ပေတာ ဖုတ်သွင်းရထား ဆိုက်ရောက်လာ )၂.. ( အမတ်တွေ ညီညာနားတော်လျှောက်ကြရှာ… ရွှေနန်းတော် စံမြန်းလိုတာ)၂ ဧကန်ဘုရင် ဖြစ်လို့လာ.. ၀ီရိယကိုသာ ဥဒါန်းကျူးပေတာ မှတ်စရာ.. လုံ့လ ကိုထုတ်ပါ ယောက်ျားပီပီ ရှိစေရာ စာဆက်ကာ ဗမာတက်စရာ မဟာဇနက္ကမင်းကို စံယူပါ….
သိလျက်နဲ့သာ …. ၀ ….. ၀ …… စံယူပါ..။
ဤသီချင်းစာသားကို ကူးယူဖော်ပြခွင့်ပေးသော Facebook မှ ခေတ်ဟောင်းတေးများ (စစ်ကြိုခေတ်မှ ၁၉၄၈အထိ) အဖွဲ့အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။